Dhageyso: Olole ku saabsan wacyi-gelinta nabadda iyo wax-soosaarka oo ka bilowday Sh/Hoose – Radio Muqdisho
Dhageyso: Olole ku saabsan wacyi-gelinta nabadda iyo wax-soosaarka oo ka bilowday Sh/Hoose
Dowlada Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo iskaashanaya ayaa wada dadaallo bulshada ku dhaqan gobolka Shabellaha Hoose lagu fahansiinayo Nabada iyo wada noolashaha bulshadda, iyadoo kor loo qaadayo dib u heshiisiinta deegaanka.
Qorshahaan ay isla wadaan dowlada dhexe iyo maamulka Koofur Galbeed ayaa loo xilsaaray maamulka gobolka Shabeellada Hoose si ay u keenaan qorshe lagu wacyigalin karo bulshada ku nool gobolkaas, kuwaas oo u badan beeralayda.
Maamulka ayaa bulshada ku wacyi galinaya inay ka shaqeeyaan nabada, is dhexgalka iyo tacbashada beerahooda si ay u noqdaan bulsho dhan waliba ka dheeli tirin, iyadoo maamulku uu balan qaaday inuu gacan ka gaysan doonaan wax waliba oo lagu hormarinayo bulshada ku nool Shbeellada Hoose.
Ololahaan ayaa hada laga bilaabay deegaano hoos taga magaalada Marka oo xarun u ah gobolka, waxaana deegaanadaas ka mid ah Janaale iyo Buufow-bacaad wacyigalinta la siinayo bulshada waxaa qayb ka ah fanaaniin wada heeso ka hadlaya nabada iyo wax soo saarka.
Xudeyfi oo ka tirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab oo isa soo dhiibay